NGWA WINDOWS 10 AGAGHỊ EMEPE MA Ọ BỤ MECHIE OZUGBO EMESỊRỊ MMELITE? NA-AHAPỤ YA - WINDOWS 10
Ngwa Windows 10 agaghị emepe ma ọ bụ mechie ozugbo emesịrị mmelite? Na-ahapụ ya
Windows 10 bụ otu n'ime mmelite siri ike na nke siri ike nke Microsoft mere na sistemụ arụmọrụ ha. Sọftụwia a nwere ọtụtụ njirimara na-atọ ụtọ, mana otu atụmatụ kachasị ewu ewu bụ Microsoft App Store ebe ndị ọrụ nwere ike ibudata ọtụtụ ngwa akwụ ụgwọ na akwụghị ụgwọ. Njirimara a dị mma, mana oge ụfọdụ n'ihi ụfọdụ mmejọ dị n'ime, Ngwa Windows 10 agaghị emeghe dị na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị na-agabiga ụdị nsogbu yiri ebe ngwa ọdịnala kachasị amasị gị agaghị emepe, ma ọ bụ windo 10 ngwa ọdịnala meghere ma mechie ozugbo mgbe ahụ mkpa ọ bụla ịtụ ụjọ dịka ọ bụ nsogbu a na - ahụkarị ma enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji dozie ya -
Ọdịnaya gosi 1 Windows 10 ngwa anaghị arụ ọrụ 1.1 Gbaa mbọ hụ na emelitere sistemu Windows 10 1.2 Lelee na gị na ngwa ọdịnala na-emelite 1.3 Gbaa mbọ hụ na Windows Update Service gị na-agba ọsọ 1.4 Gbaa Windows Store Apps Troubleshooter 1.5 Gbanwee nwe nke C drive abụọ Tọgharia nsogbu nsogbu 2.1 Gbanyụọ Njikọ Njikọ 2.2 Gbanwee FilterAdministratorToken na ndekọ Editor
Windows 10 ngwa anaghị arụ ọrụ
E nwere ike ọtụtụ ihe kpatara nsogbu a, ma ndị kasị nkịtị na-emerụ ngwa ụlọ ahịa dị n'ime oghere, Ọzọ rụrụ arụ usoro faịlụ, adabaghị ụbọchị na oge ma ọ bụ buggy update na-emekwa windows 10 ngwa ọdịnala na-adịghị arụ ọrụ mgbe Mmelite. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya mere na ọdabara ngwọta i nwere ike ide idozi Windows 10 ngwa nsogbu.
Tupu ịga n'ihu anyị na-akwado:
Lelee ma jide n'aka na usoro sistemụ gị na ntọala Oge ziri ezi,
Gbanyụọ antivirus nwa oge ma kwụpụ ya VPN (ma ọ bụrụ na ahazie ya)
Pịa Windows + R, pịnyere wsreset.exe wee pịa ọ dị mma, Nke a ga-ekpochapụ oghere nke Windows 10 Store ma nyere aka dozie nsogbu na ịwụnye ma ọ bụ melite ngwa na ngwa mepere ma mechie ozugbo.
Gbaa mbọ hụ na emelitere sistemu Windows 10
Nke a bụ azịza mbụ na nke kachasị mkpa ị ga-etinye tupu ịme ihe ngwọta ndị ọzọ. Microsoft na-ewepụta mmelite Windows 10 mgbe niile yana ndozi ndozi dị iche iche yana ndozi nche na installingwụnye windo kachasị ọhụrụ nwere ndozi ahụhụ maka nke ahụ na-eme ngwa Windows 10 anaghị emepe.
err_connection_reset chrome windo 10
Pịa Windows + I keyboard ụzọ mkpirisi iji mepee ngwa ntọala,
Pịa na Mmelite & nche karịa Windows update,
See Check maka mmelite button ka Windows update download si Microsoft nkesa na-,
Ozugbo ọ gwụchara, regharịa Windows iji tinye mgbanwe ndị ahụ,
Ugbu a chọpụta na-emeghe ọ bụla ngwa ma ọ bụrụ na-arụ ọrụ kwesịrị.
Lelee na gị na ngwa ọdịnala na-emelite
Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị kachasị nke ngwa ndị arụnyere na sistemụ gị, mgbe nke a nwekwara ike bulie okwu nke ngwa anaghị emeghe. Iji lelee ma ngwa gị niile dị ugbu a ma dozie njehie a ị ga-agbaso iwu ahịrị a.
Chọọ maka ụlọ ahịa Microsoft ma họrọ nsonaazụ mbụ
Ozugbo Storelọ Ahịa Microsoft mepere, mgbe ahụ ị kwesịrị ịpị na nhọrọ Akaụntụ Microsoft gị dị ugbu a n'akụkụ aka nri aka nri n'akụkụ igbe ọchụchọ ma họrọ Nbudata na Mmelite na menu.
Naanị pịa bọtịnụ mmelite ma melite ngwa gị niile n'otu Pịa.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na Storelọ Ahịa Windows anaghị arụ ọrụ , mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale ụfọdụ usoro ndị ọzọ site na akaụntụ ọrụ dị iche na kọmputa gị. Dị ka -
Microsoft mmalite menu nsogbu nsogbu
Open Run mkparịta ụka igbe ma họrọ Command Prompt from the menu.
Ozugbo iwu ozugbo na-arụ ọrụ, ị ga-abanye na-eso akara -
Gbaa mbọ hụ na Windows Update Service gị na-agba ọsọ
Usersfọdụ ndị ọrụ ekwupụtala na ngwa Windows 10 agaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na Ọrụ Nwelite Windows ha anaghị arụ ọrụ. Yabụ, ị kwesịrị ịlele ọnọdụ nke Ọrụ Nwelite Windows gị wee mee na ị ga - agbaso usoro ndị a -
Naanị pịa igodo Windows + igodo R ọnụ na keyboard gị iji mepee igbe mkparịta ụka Run. wee tinye services.msc wee pịa OK.
Nke a ga-emeghe Windows ọrụ njikwa
Pịgharịa gaa na Chọta Windows Update si ọrụ ndepụta
Gbaa mbọ hụ na ya (Windows update ọrụ) mmalite eitherdị bụ ma Manual ma ọ bụ Akpaaka. Ọ bụrụ na-adịghị setịpụrụ mgbe ahụ i nwere ike okpukpu abụọ pịa Njirimara ma họrọ akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ Akpaaka site na listi.
Pịa OK ịzọpụta mgbanwe.
Gbaa Windows Store Apps Troubleshooter
Windows 10 nwere ụlọ nsogbu na-enyocha usoro gị ma chọpụta nsogbu ọ bụla nwere ike igbochi ngwa ngwa Storelọ Ahịa Microsoft ịrụ ọrụ ọfụma. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ na-edozi ndị a na-akpaghị aka n’emeghị ihe ọ bụla. Na-ahapụ onye na - ahụ nsogbu na - eso usoro ndị nwere ike inye aka idozi nsogbu ahụ maka gị.
Pịa Igodo Windows + M keyboard cutzọ mkpirisi imeghe Ntọala.
Gaa na Mmelite & Nche> Nchọpụta nsogbu .
Chọta Ngwa Storelọ Ahịa Windows na ndepụta ahụ, pịa ya, wee pịa Gbaa ndị nsogbu ahụ .
Malitegharịa ekwentị Windows ozugbo usoro nhazi nsogbu ahụ mechara
Ugbu a lelee ma enyemaka a idozi ngwa Windows 10 agaghị emepe okwu.
Gbanwee nwe nke C drive
Enwere ụfọdụ ebe Windows 10 anaghị emeghe n'ihi nsogbu nke onye nwe ya, mana enwere ike idozi ya ngwa ngwa. Iji gbanwee ikike nke folda, ma ọ bụ nkebi draịvụ ike, ị ga - eji usoro ndị a -
Mepee PC gị ma kpughee maka draịva ebe arụnyere Windows 10, ọ kachasị C ụgbọala.
Have ga-pịa aka nri na C mbanye na site na submenu pịa Njirimara.
Gaa na Nche na mgbe ahụ na Advanced.
N'ebe a, ị ga - ahụ ngalaba nke Onye nwe ma pịa Mgbanwe.
Na-esote, pịa na windo Onye ọrụ wee pịa Nhọrọ dị elu ọzọ.
Ugbu a, site na ịpị bọtịnụ Chọta Ugbu a, ị ga-ahụ ndepụta nke ndị ọrụ na otu. N'ebe ahụ ị kwesịrị ịpị otu ndị nchịkwa ma pịa OK.
Na Advanced Security Settings, ikike gị kwesịrị ịgbanwe site ugbu a gaa na ndị ọchịchị na otu ọchịchị kwesịrị-atụkwasịkwara ikike ntinye ndepụta. Nwere ike ịlele dochie nwe ke sub containers na ihe. Naanị pịa Ok iji tinye mgbanwe niile.
Tọgharia nsogbu nsogbu
Ọzọ ma ọ bụrụ na ngwa ọ bụla akọwapụtara na-akpata nsogbu ahụ, dị ka ụlọ ahịa Microsoft agaghị emeghe ma ọ bụ Storelọ Ahịa Microsoft na-emechi ozugbo ị mepechara ihe kpatara nrụpụta Storelọ Ahịa Microsoft na ntọala ndabere ya nwere ike inye aka dozie nsogbu ahụ. Can nwere ike ịtọgharịa ngwa ọ bụla akọwapụtara na Windows 10 na-eso usoro ndị dị n'okpuru.
Pịa ụzọ mkpirisi keyboard Igodo Windows + M imeghe Ntọala
Pịa na Ngwa ndị ngwa na atụmatụ sochiri,
Pịgharịa ndepụta ahụ wee pịa Storelọ Ahịa Microsoft .
Wee pịa Nhọrọ di elu> Tọgharia .
Ọ ga-egosi ịdọ aka na ntị na a ga-ehichapụ data nke ngwa ahụ, wee pịa Tọgharia ọzọ.
Ugbu a ịmalitegharịa windo ma mepee windo windo nke na-akpata nsogbu olile anya nke a na-enyere aka.
otu esi egbochi google chrome site na iji cpu
Gbanyụọ Njikọ Njikọ
Mee usoro proxy gị nwere ike igbochi ụlọ ahịa Microsoft imeghe. Gbalịa gbanyụọ gị internet n'akwụkwọ nnọchiteanya ntọala na-eso nzọụkwụ n'okpuru na-elele ma ọ bụrụ na nke a na-enyere aka.
Chọọ ma mepee “Nhọrọ Internetntanetị”.
Họrọ 'Nhọrọ Internetntanetị' nke mepee windo 'Njirimara ”ntanetị'.
N'okpuru taabụ 'Njikọ' pịa 'LAN Settings.'
Uncheck 'Jiri Proxy server' nhọrọ wee pịa 'OK'.
otu esi edozi koodu 52 windo 10
Gbanwee FilterAdministratorToken na ndekọ Editor
Ndị ọrụ Windows 10 kọọrọ ya na ngwa ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi nsogbu ahụ na Start Menu nke ha dekọtara mgbe ha na-eji akaụntụ nchịkwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye a nsogbu nke, mgbe ahụ ị nwere ike idozi ya dị ka -
Nweta igbe na-agba ọsọ site na iji igodo Windows + R ma pịnye Regedit na igbe ahụ.
Mgbe ndebanye aha na emepe emepe, gaa na igodo na-eso na mpi aka ekpe: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
N'akụkụ aka nri, ị ga-ahụ DWORD 32-bit a na-akpọ Onye nyocha FilterToken . Ọ bụrụ na FilterAdministratorToken dị, gaa nzọụkwụ ọzọ. Na-esote, ị nwere ike ịgbanwe aha nke uru ọhụrụ ahụ.
Ga-enweta DWORD ugboro abụọ na mpaghara data Bara Uru tinye 1 ma chekwaa mgbanwe ndị ahụ.
Mgbe emechi Registery Editor Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa.
Ngwa bụ n'ezie akụkụ dị mkpa nke sistemụ kọmputa gị ma ị nweghị ike ịlanarị otu ụbọchị na-enweghị ngwa kachasị amasị gị. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọghị itinye nsogbu na ngwa gị bara uru, mgbe ahụ ị ga-agbaso usoro dị mfe iji dozie nsogbu metụtara ọ bụghị mmeghe ngwa na Windows 10 gị.
Esi edozi ihe ntanetị na-enweghị windo 10
Olee otú Zọpụta Windows Chakwasa ozi mkpọchi ihuenyo Images na Windows 10
Edozi: Njirimara mmelite na windo 10 mbipute 1903 - njehie 0x80070020
Windows 10 wụnye otu mmelite ahụ ugboro ugboro? Lee otu esi edozi ya
Kwụsị Windows 10 Nwelite na ịwụnye Mmelite na akpaghị aka
microsoft onu enweghị ike iru ibe a
windo 10 melite agbaji desktọọpụ
kọmputa na mberede malitegharia windo 10
netflix na-arụ ọrụ na laptọọpụ
Windows 10 disconnecting na wifi